”Aqoonsi Israa’iil Mabixisee Aayaha Ummadda U Orod!”
Dabcan in laga fekero wixii dan ama dhib u ah Dowlad leh nimdaankeed iyo kala dambeyn waa arrin haboon in lugu dhaqaaqo. Hase ahaatee haddii dowladaasi tiraahdo waxaan dan iigu jirin baan daba ordayaa waqtigana ku dhimanayaa waa garaad yari heerkii ugu hooseeyey ee la tirsan karro. Hadaba Dowladdii Kenya lugu soo dhisay shirkii dheerka kadib waxaa ay doontey ineey meelkasta gasho siddii ay heli laheyd aqoonsi buuxa iyo kaalmo maaliyeed. Taasi maxuma waana mid la oran karro waxey dan ugu jirtaa cida dooneysa hormarka Soomaaliya haddiiba ay ka tahay daacad.
Afhayeenka Madaxweynaha dowladda dibad joogta ah ayaa wareysi uu siiyey Idaacada la hadasha Muqdisho ku sheegay in haddii dan ugu jirto dowladda u afhayeenka u yahay iney xirriir Israa’iil la yeelato ay sameynayaan. Taasi macnaheedu waxey tahay in ”Berito ay imaneyso xirriir noocaas ah” Haddiise uu hadalka sidaas u oran waa loo fasiran karaa.
Su’aasha mudan in la isweydiiyo hadaba waxey tahay dadka iyo dalka Soomaaliya danta ugu jirta maxey tahay xirriir ay layeelato maamulka Tele Aviv? Soomaalidu weligeed diin ahaan Islaam baa lugu tiriyaa xukuumadihii dalka soomaray maalin qura kuma fekerin in dan nooca kasta ee ay tahay Israa’iil kasoo geli karto ,maxeyse tahay mida Embagthi ay u aragto hadaaney danno dahsoon jirin?
Xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre oo la ogsoon yahay cilaaqaadka dalalka u arkayey iney maslaxadiisa ku jirto la lahaa ayaan marna Israa’iilka ka dhigin iney wanaag u heyso ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed.
Sida oo kale Soomaaliya weligeed Islaanimada kasokow waxaa jirtay in wax badan oo dhaqan iyo ganacsi ahaan ay wadaageen dalalka Carabta. Marrna majirin in dalalkaasi ka telin jireen aayaha ummadda Soomaaliyeed, hadaaney laftoodu qeyb ku laheyn burbirkii baaxadda lahaa ee ku dhacay Qarankeena.
Ku talinmayo In Carab Gacmaha Loohoorsado!
Soomaalida waxey horey u tiri “Tiisa daryeela tukale ku dara”, macnaha waxaa weeye in Carabi halka ay is dhigtay ay iyada iska qaadi karto, heeryada saaran ee cid saartay aaney jirin. Soomaalida dhankasta liita oo ay Carabi leedahay wey lawadaagtaa sidaasi daraadeed inta Carabi heerkaas damiir iyo caqli liita uu jiro Soomaalida wax badan uma qabsoomi doonaan. Tusaalena waxaa kuugu filan halka Falastiin ku sugan tahay aakhirkiina hogaamiyihooddii xorrnimada u astaan ahaa isagoo aan helin gobanimadii uu doonayey geeriyooday. Iyo Ciraaq oo iyadana gacanta ugu jirta gumeystaha qarniga 21aad. Midnimo dambana aan cabsi looga qabin.
Waqtiga iyo waayaha iney wax ku qaateen bey aheyd Soomaali, dhibtuse waxey tahay min shacab ilaa maamul iyo madaxweyne waxey u taagan yihiin dantood moogeyaal, waxey u hanqaltaagan waxaan dani ugu jirin iyo damaca hogaaamiyaalka oo hadafkoodu ugu weynaa u bur buriyey qaranimadii Soomaaliya aad heshaan xukun aad ka dhexmuuqatan, laakin ku fashilmay sidey dowladnimadii ay rideen u soo celin lahaayeen aakhirna ku dhamaatay sheekadoodi in dalalka danaha kaleh Soomaaliya midba magaalo lageeyo si loo heshiishiiyeo dadka damacoodu kala geeyey. Mana qabo in dadyowga ay Islaanimada isku kaaya keentay ka fogaano sababo la xirriira jiritaanka Diinteena oo halis ah. Maxaa yeelay Carabi iyadoo isku diin ah intooda badan ayaan hadana wanaag isku ogoleyn [Eegg xurgufta u dhaxeeya, Sacuudiga iyo Baxreyn, Imaaradka iyo Iiraan!]
Danta Israa’iil Naga Soogeli karro Maxey Tahay?
Afhayeenka u hadla dowlada KMG ah wareysigii uu bixiyey waxa uu ku sheegay in albaabkasta garaacayaan haddey u arkaan iney dani ugu jirto. Hadaba Israa’iil xudduud ma wadaagno sida Axmaaro danta naga ay soo geli karto ee maxey tahay waxa hadalkan ka dhawaajiyey?
Caasimadaha carbeed uu carabka ku dhiftay in calan Israa’iil leedahay ka dul ba’abanyo kuwaasi waa dad xudduudo wadaaga Sida Masar Suuriya, Ciraaq Jordan iyo dalalkale. Taariikhda inta la ogsoon yahay tan iyo qanrigii tagay Carab iyo Israa’iil waxaa u dhaxeeyey muran xag dhuleed waqtigan aanu joognana murankaasi waa halkiisi sidaas aawadeed arrimo badan oo Carabi u aragto in Amnigeeda ku jiro ayaa keentay in xirriir la yeelato, Soomalise maxey tahay dhulka xudduud ahaaneed iyo mid diimeed ay lawadaagi karrto? Jawaabta afhayeenkaas iyo intii la fikir ah baan u dayeey. Midse yaan la iska indho tirrin arintani waxaa dabada ka riixaya Itoobiya oo iyadu ah dalka keliya ee xirriir toos ah la leh Israa’iil, sidaas awgeed kuhamiyeysa in wax badan oo Soomaaliya ay ka dooneyso u hagaagan. Tusaale waxaad u soo qaadan kartaa shirkii sadex geesoodka ahaa dhawaan lugu soo gabagabeeyey magaalada Sanca ee dalka Yamnen in Soomaliya ay taariikhda markii ugu horeysay goob joog ka aheyd islamarkaasina la aqbalay xubinimadeeda ku aadan ku biirista ururkaasi ku midowbey sidey iskaga difaaci lahaayeen Ereteeraya oo iyada dalalkaasi muran xagga dhulka ah ka dhaxeeyo.
Dowladan dagaal oogeyaalka ah iyo “damiirqabayaalka” Baarlamaanka kujira waxaa haboon iney ka fiirsadaan waxa keeni kara in Qaranimadeena loolanka loogu jiro sidii loo ciribtiri lahaa lunto. Haddii dowladan sida maanta la ogsoonayahay xubnaheeda ku jira heerka ay Soomaalinimada ka joogaan ku dhaqaaqdo iney Israa’iil iyo Itoobiya miciin bidaan waxey noqoneysaa dhamaadkii magac Soomaali, waxaana maalin maalmaha kamid ah la isweydiin doona in Soomaaliya berri ku ooli jirtay Geeska Afrika, sida maanta la isku weydiinayo dhulalka ka maqan Carabta deriska la ah Israa’iil.